बाबुरामको पार्टी आर्थिक संकटमा ! पैसा जुटाउन कप-प्लेट बनाएर बेच्ने योजना – Sabaikoaawaj.com
बाबुरामको पार्टी आर्थिक संकटमा ! पैसा जुटाउन कप-प्लेट बनाएर बेच्ने योजना
बुधबार, चैत्र २३, २०७३ 8:38:21 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं ,२३ चैत/ चुनावको मुखमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा नयाा शक्ति पार्टी आर्थिक संकटमा परेको छ । पार्टी गठनको घोषणा भएको झण्डै ९ महिनामै पार्टीलाई ११ लाख बढी ऋण लागिसकेको छ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र २३, २०७३ 8:38:21 PM